नेविसंघका नेताप्रति देउवाको आक्रोश - NRN Khabar
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको भ्रातृसंगठन नेविसंघका नेताहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार नेविसंघ केन्द्रीय समितिले गरेको रक्तदान कार्यक्रममा देउवाले आफ्ना कार्यकर्ताको झाँको झारेका हुन् ।उनले आफू आफू लडेर नेविसंघको संगठन नै सिध्याएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । आफू नेविसंघको अध्यक्ष भएकैले चारचोटि देशको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको भन्दै उनले अहिले कहाँ छ नेविसंघ ? भन्दै रोष व्यक्त गरे ।
देउवाले भने, ‘डरलाग्दो रोग आएको छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने सबै टासिएर बसेका छन् । यस्तो बेला किन कार्यक्रम गर्नुपर्यो, किन भाषण गर्नुपर्यो ? नेविसंघ कहाँ छ ? गाउँमा छ ? स्कुल, कलेजमा छ ? काठमाडौमा दुई–चारजना भएर हुन्छ ?’ नेविसंघको नेता भन्ने अनि काठमाडौंमा बसेर राजनीति गर्नाले संगठन सिद्धिएको देउवाको भनाइ थियो ।
‘नेविसंघ सधै हारेको छ । म पनि नेविसंघको अध्यक्ष भएको हाम्रो पालामा हार्दैनथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष भएको म चारपटक प्रधानमन्त्री भए, यस्तै गतिले तिमीहरू कोही हुन्छौ ? गाउँमा, स्कुल कलेजमा संगठन गर्न नजाने, राजधानीमा बसेर ठुलाठुला भाषण गर्ने । राजधानी बसेर सधैं आपसमा झगडा गरेर मात्रै संगठन बन्छ ? पहिला संगठन गर्न जाउ अनि मसँग कुरा गर्न आउनु । लाज पनि छैन,’ देउवाले भने ।
अमेरिकाज् क्षेत्रको स्थगित क्षेत्रीय विज्ञ सम्मेलन आगामी सेक्टेम्बर ५ मा क्यानडामा गर्ने निर्णय